Iindaba -Umhla wokwakhiwa kweligi
Ukuze batyebise ubomi bexesha labasebenzi, banciphise uxinzelelo lwabo emsebenzini, kwaye ubanike ithuba lokuphumla ngokupheleleyo emva komsebenzi, iHangzhou Hengao Technology Co, Ltd. iququzelele umsebenzi wokwakha iqela ngoDisemba 30, 2020, kunye nabasebenzi abangama-57 inkampani ithathe inxaxheba kulo msebenzi. Emva kokufumana ubhaptizo lwesaqhwithi semvula, i "Silver River blue" engabonwa kudala yabonakala esibhakabhakeni. Ngo-9: 30, bonke abasebenzi bahlanganisana esangweni lolwakhiwo oluphambili besiya kwindawo ekuyiwa kuyo - i -Exposition Park. Yonke indlela, besihleka sihleka, sibaleka kwindlela engenanto siye kwiintliziyo zethu. Ngentsimbi ye-10 o, bonke abasebenzi baya kudibana phambi kwegadi ephambili beze kubukela imisebenzi yokwakha yeqela lemiboniso. Lo msebenzi wahlulwe wangamacandelo amahlanu: ukutyelela ipaki, ukukhetha iziqhamo kunye nemifuno, i-rafting yangaphakathi, imidlalo yeqela kunye ne-barbecue eyonwabisayo.
Silandele isikhokelo kwiholo yemiboniso yegadi ngokundwendwela. Sibonile ukuba kwindlu enye eluhlaza bekukho zombini izityalo eziqhelekileyo e-China kunye nezityalo ezixabisekileyo kumazwe angaphandle, kwaye zigqunywe ngumboniso wezityalo ezizodwa. Emva kokundwendwela, sonke saziva sivuleka amehlo. Kwinkqubo yokuvunwa kweziqhamo kunye nemifuno, ngokwenene sinamava, sabelana ngamava okuchola iziqhamo kunye nemifuno, sishiya iziqhamo kunye nemifuno yokugcina izindlu esingenayo "indebe".
Kwakukho ikhefu elifutshane emva kwesidlo sasemini. Ke bonke abasebenzi bahlanganisene kwindawo evulekileyo yomdlalo wokwandiswa kweqela, sahlulwa sangamacandelo ama-5, kumdlalo ngamnye ukukhuphisana ngamandla, ubumbano lweqela ludlala ngokungangxamanga nangokucacileyo. Ngeli xesha, sukuyenza i-United States isibhakabhaka sidubule, nambitha i-barbeque yesiqingatha sexesha eligalela imvula iza ngequbuliso, usapho olukhulu aluzange lube lolubi kwimozulu leyo yeyolonwabo, kwisiqingatha sesibini somsitho wokuzalwa Kwintsikelelo yomntu wonke njengoko bekucwangcisiwe, kubomi benkwenkwezi bafumene isipho somhla wokuzalwa, inkampani ekhethekileyo yolu tshintsho, wonke umntu afudumele kwimvula ebandayo. Wonke umntu ehleka, ukugqitywa ngempumelelo kweqela lokwakha imisebenzi. Ngalo msebenzi wokwakha iqela, siphucule ukuqondana, sasisondeza iimvakalelo zomntu wonke, songeza umanyano kunye nokumanyana kwabo bonke abasebenzi beHangzhou Hengao Technology, masibe nomdlandla ophezulu kumsebenzi wexesha elizayo.